अस्ट्रेलिया र भारत भिड्दै : कमजोर सुरुवात गरेको भारतलाइ जोगायो पुजाराको शतकले ! - Hamro Nepal Cricket
अस्ट्रेलिया र भारत भिड्दै : कमजोर सुरुवात गरेको भारतलाइ जोगायो पुजाराको शतकले !
अस्ट्रेलियन बलरको उत्कृष्ट प्रदर्शन !
टि-२० श्रृङखला पछि भारतिय टोलिले टेस्ट श्रृङखलाको पहिलो खेल खेल्दैछ। पहिलो टेस्टको पहिलो दिन आज , भारतले स्टम्प्स हुदा सम्ममा ९ विकेट गुमाएर २५० रन बनाएको छ ।
भारतको सुरुवातभने राम्रो भएको थिएन । ओपनर के एल राहुल र मुरली बिजय सस्तैमा पबिलियन फर्किएपछि कृजमा आएका पुजाराले भने उत्कृष्ट पारी खेले। कप्तान कोहलीले ३ रन बनाउदै प्याट् कमिन्सको बलमा आउट हुन पुगेपछी भारतिय टोलिको लय बिग्रेको थियो ।
कोहली , बिजय , राहुल आउट भएपछी रहाणेपनि सस्तैमा पबिलियन फर्किए । पुजारा भने भारतको आश बनेर डटिरहे , उनलाई साथ दिदै रोहितले ३७ , पन्तले २५ रन बनाए । पुजाराले २४६ बलको सामना गर्दै दुई छक्का र सात चौकाको मद्द्तले १२३ रनको शानदार शतक जडे !
अस्ट्रेलियाका लागि मिचेल स्टार्क , हेजलवुड , कमिन्स, र लायनले दइ दुई विकेट चट्काए । टिम पेनद्वारा कप्तानित अस्ट्रेलियन टोलिले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै शानदार लयमा रहेका भारतीय खेलाडिलाइ काबुमा राख्न सकेको हो ।